Waa maxay Sanno Sodo Memorial Hall? | Sanno Sodo Memorial Hall
Tokutomi Soho waa qofka daabacay joornaalkii ugu horreeyay ee dhammaystiran ee "Saaxiibka Qaranka" ee Japan ka dibna "Kokumin Shinbun".Mucjisada weyn ee Soho, "Taariikhda Dadka Jabbaan ee Casrigan casriga ah", waxaa la bilaabay 1918 (Taisho 7) isagoo jira 56 sano waxaana la dhameystiray 1952 (Showa 27) da'da 90.In ka badan kalabar 100-ka mug ayaa la qoray xilligii Omori Sanno.Soho wuxuu u guuray aaggan 1924 (Taisho 13) wuxuuna ku noolaa magaca Sanno Sosudo ilaa uu u guuray Atami Izusan 1943 (Showa 18).Gudaha hoyga, waxaa ku yaalay Seikido Bunko, oo ay ku jiraan 10 buugaag Jabbaan iyo Shiine ah oo ay soo aruurisay Soho.
Halkan riix si aad u hesho macluumaadka bandhigga
Tokutomi Soho iyo Catalpa
Magaca Jabbaan ee geedka catalpa ee beerta dhexdeeda waa American Catalpa ovata.Waa geed laxiriira Joseph Hardy Neesima, oo ah macalinka nolosha Soho iyo aasaasaha jaamacada Doshisha.Weli waxaa si taxaddar leh loogu ilaaliyaa inuu yahay geed sharaf leh oo astaan ​​u ah jacaylka labada sayid iyo ardayda, oo Maajo iyo Juun kasta, waxay dhashaa ubaxyo cadcad oo udgoon u eg.
Tokutomi Soho Soo Gaabinta Sannadka
Wuxuu ku dhashay Janaayo 1 (Maarso 25-keeda kalandarka cusub) Tuulada Sugido, Degmada Kamimashiki, Degmada Kumamoto, tuulada Hooyo Hisako.
U dhaqaaqay Tokyo iyadoo ujeedkeedu yahay inuu noqdo wariye wargeys ah.Wuxuu Galay Iskuulka Ingiriisiga ee Tokyo (oo markii hore ahaa dugsiga sare) markii dambena wuxuu u wareegay Doshisha English School.
Maarso 3 Oe Gijuku ayaa furmay.
Soo dhaweynta Marwo Shizuko.
La daabacay "Japan mustaqbalka".Oe Gijuku wuu xirmay qoyskiina oo dhan waxay u guureen Tokyo.
Waxaa la aasaasay Minyusha lana daabacay "Asxaabta Qaranka".Waxaa loo yaqaan Soho.
Cadadka koowaad ee "Kokumin Shinbun", madaxweynaha iyo tifaftiraha guud.
Booqday Tolstoy, socdaalkiisa Yurubna wuxuu la socdaa Eigo Fukai.
Loo xushay xubin ka tirsan Aqalka Sayidka.
Ku darsaday muggii ugu horreeyay ee taariikhda qaran ee Japan horraantii xilligii casriga ahaa.
Sanno Kusado waa la dhameystiray.Qoysku halkan ayuu u guuraa.
Xubin ka tirsan Akadeemiyada Imperial.
Ka tag shirkadda Kokumin Shinbun.Noqo marti sharaf sharaf Daigo Tohnichi (Mainichi Shimbun).
Wuxuu xubin ka noqday Akadeemiyadda Imperial Academy of Arts.
Waxay heshay Amarka Dhaqanka waxayna u guurtay Atami Izusan Yoseidou.
Markuu dagaalkii dhammaaday, wuxuu diiday dhammaan xafiisyadii iyo maamuuskii bulshada.
Waxaa la dhammaystiray qabyo-qoraalka mugga 100-aad ee Taariikhda Qaranka.
Wuxuu noqday muwaadin sharaf leh ee Magaalada Minamata iyo muwaadin sharafeed ee Magaalada Kumamoto.
Wuxuu ku dhintey Nofeembar 11 Atami Izusan Yoseidou.